सुहाग’रातमा श्रीमतीलाई देखेर उड्यो होस, भाउजुलाई बताएपछि (भिडियो सहित) - Mitho Khabar
June 28, 2021 mithokhabarLeaveaComment on सुहाग’रातमा श्रीमतीलाई देखेर उड्यो होस, भाउजुलाई बताएपछि (भिडियो सहित)
भारतको कन्नौजमा शनिबार अचम्मित गरिदिने घटना सार्वजनिक भएको छ यहाँका एक बेहुलाले जब सुहाग’mरातमा आफ्नी दुलहीलाई देखे तब उनको होस उड्यो । अर्को दिन उनले यसबारे भाउजुलाई बताए तब हंगामा मच्चियो । गाउँमा पञ्चायतपछि महिला पक्षले कान्छी छोरीसँग विवाह गराइदिने बाचा गरेका थिए ।
कानपुर देहात इलाकामा यो घटना भएको हो । यहाँका एक युवकको विवाह भएको थियो । सुहाग’रातमा युवकले उनकी श्रीमती ट्रान्सजेन्डर भएको थाहा पाए जसले उनलाई झट्का दिलायो । यो कुरा युवकले गएर आफ्नी भाउजुलाई सुनाए । त्यसपछि केटीपक्षलाई बोलाइयो र मुद्दालाई गोप्य ढङ्गले सुल्झाउने कोसिस सुरु भयो ।
हालै गरिएको एक अध्ययनमा खुलासा भए अनुसार पुरुष महिलाहरू भन्दा धेरै झूटो बोल्दछन् । एकातिर महिलाहरू कसैको भावनामा ठेस नपुगोस भन्ने डरले साँचो कुरा लुकाउछन् भने, अर्कोतिर पुरूष आफ्नो पैसा बचाउँन वा बहसमा जित्नका लागी झूटोको साहरा लिने गर्दछन् । औसतमा पुरुषहरू सातामा ४ पटक झुटो बोलने गर्दछन् वा साँचो कुरा लुकाउने कोशिश गर्दछन् ।
जबकि महिलाहरू सातामा तीन पटक यसो गर्दछन् । कसैलाइ मुस्किल अबस्थाबाट निकाल्ने मामलामा पनि पुरुषहरू प्रायजसो झूटो बोल्दछन् । पुरुषहरू कुनैपनि कुरालाइ अझ बढि सनसनीखेज बनाउने कोशिश गर्दछन् । २००० जना ब्रिटिश युवकहरूमाथि गरिएको ताजा एक सर्वेमा यो कुराको खुलासा भएको हो ।
मानिसहरू सबैभन्दा धेरै झूट आफ्नो मूडलाइ लिएर बोल्दछन् । दुखित पुरूष दुखी भएर पनि ‘म ठीक छु’ भनेर झूटो बोल्दै यस कुरालाइ रोक्ने गर्दछन् । अर्को सबैभन्दा झूटो कुरा कुनै गिफ्ट मन नपरेपनि दिनेलाइ नराम्रो नलागोस भनेर राम्रो भन्ने गर्दछन् । यस पछि कुनै चीजको मूल्य तथा रोगका बारेमा पुरूषहरू सबैभन्दा धेरै झूटो बोल्ने गरेको कुरा उक्त सर्वेमा देखिएको छ ।
आफ्नै दाइ ले बहिनीलाई यस्तो सम्म गर्यो, १६ लाख पैसाले के के गर्यो हेर्नुस्.(भिडियो सहित)
किन देखिन्छ यौन-सपना !
April 8, 2020 April 8, 2020 mithokhabar